Vakapona ve 'Zuva revakafa' Kudzoka Kwe 'Husiku hweVapenyu Vakafa II'
musha Horror Varaidzo Nhau Vakapona ve 'Zuva revakafa' Kudzoka Kwe 'Husiku hweVapenyu Vakafa II'
by Trey Hilburn III July 7, 2021 2,804 maonero
Wow. Izvi zvakanyanyisa kutendeseka kutaura. Zvinoitika kuti nyaya yevakapona kubva George Romero's Zuva revafi haisati yapera chete izvozvi. Nezuro, chifananidzo uye kapfupi teaser yakabuda uye isu takapotsa tarasikirwa nepfungwa dzedu dzakatukwa. Zvinoita sekunge tiri kuwana imwe nhanho Zuva revafi titled Husiku hweVakafa Vakafa II.
Iyo teaser inoratidza vatatu vakafukidzwa muropa uye vakagadzirira kurwa mumwe nemumwe akabata inozivikanwa hondo pozi. Mutsara wenyaya yacho unoti vanopona vanenge vaita imba pachitsuwa. Izvo zvine musoro, sezvo ivo vaine zviroto zvikuru nezvekuzviita kune zombie isina chitsuwa. Uyezve, vanoita kunge vakachinjika mushe munzvimbo yavo nyowani vachifunga yavo chaiyo inotonhorera yehembe yeHawaiian hembe dzekuchera.
Lori Cardille, Terry Alexander, naJarlath Conroy vese vadzoka kune uyu. Hapana kushamisika kudzokorora kweiyi.
Director, Marcus Slabine ari kutora chinzvimbo semunyori uye director pane izvi uye anofara kwazvo pamusoro pezvemagariro venhau kuve nerukudzo rwekutungamira vatatu ava.
Pachine hapana zuva rekuburitsa zviri pamutemo Husiku hweVakafa Vakafa II, asi isu ticharamba takatarisa maziso edu kune zvimwe zviitiko.
Imi varume munofungei nezve turera? Iwe watove wakanakidzwa kuona iro rekutanga Zuva revakafa rakakandirwa kumashure pachiratidziri? Tiudzei muchikamu chemashoko.
Halloween 1-5 inouya ku4K UHD discs kubva Shout! Fekitori. Verenga zvimwe pano.